मंगलबार, वैशाख २८, २०७८ ०३:१५:५२ Tuesday, 11 May, 2021
शुक्रबार, वैशाख १७, २०७८ News Missile
कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) परिक्षा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख भएर हामी माँझ परिक्षा लिईरहेको छ। परिक्षा दिने क्रममै छौं! निरन्तर चलिरहेको छ। सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै थरिले चलिरहेको छ। यो समय परिक्षाको लागि उपयुक्त छ छैन। कुनै लोखाजोखा पनि गरिएको झैं लाग्दैन।
आकाशेबालिको यो समयमा परिक्षा लिनु उपयुक्त हो, होईन । खेतबारीमा सलह झैं जुट्नु पर्ने यो समयमा एकाएक कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) ले बलजफ्ती गरिरहेको छ झैं लाग्यो । यस्तो बिषम् परिस्थितिलाई अँगाल्दै बाँच्नुको बिकल्प समेत खोजिएको बिषय बनाईदिएको छ।
आखिर सडक तताउने, उफार्ने, उफ्रिने, नारा ओकल्ने, जुलुस निकाल्ने अनि कोणसभा र भाषण कुन बक्सामा बन्दी कैदी अवस्थामा छन्। परिक्षा लिएरै छाड्ने कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) को नियति नै बनेको छ। यो मैं हुँ भन्ने अति बिकसित भू-मण्डललाई समेत परिक्षाको दायरामा पारिरहेको छ । यहि देखेरै होला हाम्रा बिद्यार्थीहरूले आँट नगरेका। परिक्षा नियन्त्रकको लागि हो भने त यसको रूपै फेरि सक्ने थियो । यहाँ कुर्सीको महत्व र यसबाट क्षेत्र दोहोनको अवसर ठान्नेछ।
व्यवस्थापनको ठेकेदारी के को हो ? अत्तोपत्तो छैन । दुवै हातका नङ्ग्रा मात्र नभएर, पाए त खुट्टाले समेत बाँकी नराखौं भन्ने प्रबृत्तिको चरोन्मोत्सर्ग पुग्दै गरेको समय छ । नियति र नियतमा खोटको शंकाले बाक्लै घोरा हाल्न थालेका छन्। भरोसा कस्को ०७७ लाई नै ००७ मा झारिसकेको अवस्थाले बोध गर्न बिवस बनाई दिएको छ। अब त ०७८ साललाई समेत गाँजिदै लगिदैछ।
परिक्षार्थीहरू पातलिंदै गएको छ। कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) आफ्नो जिद्दी स्वभावले परिक्षा आयातित सुपरभाईजर खटाएरै भएपनि आफ्नो उद्देश्य पूरा गरि छाड्ने धुनमा छन् । संक्रमितहरूको परिक्षा केन्द्र नै तोक्न नसक्ने लाचारिपनाले बढावा दिनहुँ झैं मिल्दै गईरहेको छ। अतिक्रमित परिक्षा केन्द्रमा संक्रमित परिक्षार्थीहरूद्वारा परिक्षामा संक्रमण हुँदै गयो भन्दा सुन्नेको कानमा बतासै लाग्न छोड्यो।
"भाग्यमानीको भूतै कमारो" भने झै गजबको उक्ति याद आयो । "चिन्नु न जान्नु घचेटी मार्नु" यसले पनि साथ दिन पो आएझैं लाग्यो। "काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी कतातिर" भने झैं । यि टुक्काहरू फलाक्दा कस्लाई पो बास्तबिकताबाट पंछिन मन लाग्छ र ? तर कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) ले आफ्नै ऐन, नियम, कानून लगाउँदै परिक्षा लिएको लियै गर्न पछि परेका छैन।
पहिलो लहरको परिक्षाले बलजफ्ती निरन्तरता लिईरहेको बेला नटुङ्गिदै दोश्रो चरणको परिक्षा लिन लागिपरिरहेको छ यो कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) ले। कुनैपनि परिक्षा, परिक्षा नियन्त्रकको मातहतमा हुने गर्दछ। यो सर्वबिदितै जानकारीको पक्ष हो। परिक्षा यहाँ कसको भईरहेको छ? अघोषित परिक्षा केन्द्र घरघरलाई तोकिदिएको छ । अनपढ, अनभिज्ञ सबलाई परिक्षामा सहभागी गराई दिएको छ।
यो परिक्षाको जिम्मेवारी कसले लिने ? लब्धाङ्क-पत्र कहाँबाट बितरण गर्ने? मूलत: परिक्षा नियन्त्रक नै को हो ? देशको सरकार मातहतका शैक्षिक गतिबिधिमा हुँदो हो त कथित नेतृत्व सामु तँछाड् मछाड्नै भईसक्ने थियोे। हामीलाई मुख्य परिक्षा नियन्त्रक बिना नै परिक्षामा सामेल गराईएको वर्तमान अवस्था छ !
०७७/०७८ सालको बाध्यात्मक परिक्षामा सामेल हुनेहरूको सफलतामा पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ। प्रथम पछि २८ दिन भनिएतापनि नैतिक दायित्व बोध गर्ने परिक्षा नियन्त्रक नहुँदा २८ दिन पश्चातको मुल्यांकन नै गौण बनादिएको छ। २८ दिन होईन, अर्को महिना, त्यो पनि होईन, यो महिनाको यति गते भन्न समेत छोडिएन। के अब यसले सार्थक परिणाम देला त? हो यसैको सेरोफेरोमा कसी कसैलाई निहाल्ने हो भने पहिलो र दोश्रो चरणमा सामेल भएकाहरूले पटक पटकको परिक्षार्थी कहिलेसम्म बन्ने? यो अवस्थाले ब्यापकता पाउन थालेको छ ।
कुर्सीको दम्भकासाथ एकाएक पूर्ण तयारीमा रहेको परिक्षालाई स्थगित बनाइ दिए। त्यसैसंग लोलोपोतो मिलाउँदै उपत्यकाका त्रिमूर्तिद्वारा अत्यावश्यक सेवाको सिलसिलामा बाहेक अरू क्षेत्रलाई कडाइकासाथ पूर्णत: निषेधाज्ञा जारी गर्ने गरिएको निर्णयको पालक भएका छौं तपाईं हामी। मानौं १५ गतेको रातसम्म कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) लाई प्रवेश निषेध गरिएकोमा अबका दिन यानेकि १६ गतेदेखि यो द्रुतगतिमा प्रवेश गर्न स्वागत गर्दै सब जनमानस घरघरमा निषेधाज्ञाको पालक बनि लकडाउनको पालना गर्न विवस बनाइदिएको छ।
पहिलेको पाठ, अनुभव र इतिहासलाई नजर अन्दाज गर्दै यो अवस्था आइपुग्दासम्ममा पनि दिनहुँ तीन/चार लाख भन्दामाथि कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) बाट संक्रमितको संख्यामा बृध्दि भइरहेको छिमेकी राष्ट्र भारतको सिमाबाट हालसम्म निर्वाधरूपमा आवत-जावतले सम्बन्धित निकाय र सरकारमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। के कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) नै हाम्रो भविष्य हो ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १७, २०७८, २०:००:००
आइतबार, वैशाख २६, २०७८ News Missile